कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घन्टामा ८ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ९१ पुग्यो ! – Namaste Dainik
August 12, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घन्टामा ८ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ९१ पुग्यो !
ललितपुरस्थित किस्ट अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौंको टेकुकी ७८ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । साउन २६ गतेदेखि किस्ट अस्पतालमा उपचाररत उनी मधुमेह, रक्तचापका समस्याबाट पीडित थिइन् । त्यसैगरी धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका १४ निवासी ३२ वर्षीय पुरुषको साउन २७ गते ह्याम्स अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनी क्षयरोगी थिए । २७ गते कोरोना पुष्टि भएका उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
बारा जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिका निवासी ७५ वर्षीय पुरुषको साउन २८ गते किष्ट मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । उनी साउन २६ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । साउन २८ गते कोरोना पुष्टि भएका उनी मिर्गौला तथा दमका रोगी थिए । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९१ पुगेको छ ।
काठमाडौं उत्यकामा एकैदिन १ सय ३८ व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
राणाकालमै चल्थ्यो काठमाडौँमा रेल [भिडियो रिपोर्ट]